भारतमा एकैदिनमा ९२ हजार ६०५ सङ्क्रमित, कुल सङ्क्र,मितको सङ्ख्या ५४ लाखभन्दा बढी – AB Sansar
भारतमा एकैदिनमा ९२ हजार ६०५ सङ्क्रमित, कुल सङ्क्र,मितको सङ्ख्या ५४ लाखभन्दा बढी
September 20, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on भारतमा एकैदिनमा ९२ हजार ६०५ सङ्क्रमित, कुल सङ्क्र,मितको सङ्ख्या ५४ लाखभन्दा बढी
एजेन्सी । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट एक दिनमा ९२ हजार ६०५ पुगेको छ । योसँगै भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरुको कुल सङ्ख्या ५४ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै कोरोनाकै कारणले एक हजार १३३ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।
भारतमा कुल सङ्क्रमित मध्ये अहिले पनि दश हजार ८२४ जना सङ्क्रमित अवस्थामै रहेका छन् । भारतमा सङ्क्रमित मध्ये ४३ लाख ३ हजार ४४ जना भने सङ्क्रमणमुक्त भइसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म कुल ५४ लाख ६२० जना सङ्क्रमित भएका हुन् । प्रदेश अनुसार हेर्दा सवैभन्दा धेरै महाराष्ट्र प्रदेशमा सङ्क्रमित भएका छन् ।
महाराष्ट्रमा अहिले पनि तीन लाख एक हजार २७३ जना सङ्क्रमित अवस्थामै रहेका छन् भने कर्नाटकमा एक लाख एक हजार १४८ जना सक्रिय सङ्क्रमितहरु छन् । त्यसैगरी आन्ध्र प्रदेशमा ८८ हजार १९७ जना, उत्तर प्रदेशमा ६८ हजार २३५ र दिल्लीमा ३१ हजार ७२१ जना सङ्क्रमितहरु अहिलेपनि उपचारकै क्रममा रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । भारतीय मेडिकल रिसर्ज काउन्सीलका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म छ करोड १५ लाख ७२ हजार ३४३ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
खुसीको खबर आज एकै दिन यति धेरैले कोरोना जितेर घर फर्के, हेर्नुहोस विवरण !
म’र्ने कसैलाई रहर हुँदैन’ की गायिका रजिना रिमाल र उनका पतिलाई को’रोना सं’क्रमण पुष्टि !
October 5, 2020 Ab-संसार